rayhab ဖြစ်ပါသည် - Kayseri ၏တိုးတက်မှုစီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်အကြားdivriğiတံတားတွေ့ရှိခဲ့
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုDivrigi Kayseri ၏တိုးတက်မှုဟာတံတားအကြားစီးပွားရေးလေလံရလဒ်တွေ့ရှိရ
နု၏ရလဒ်များကိုတိုးတက်အောင်divriği kayser တံတားအကြားတည်ရှိသည်
Kayseri အကြားနုတံတားတူရကီပြည်နယ်မီးရထား Divrigi-တိုးတက်အောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များ4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး4။ Divrigi-တိုးတက်မှု၏ TCDD 2019 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှုန်း 275427 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ဧရိယာဝယ်ယူအမိန့်ညွှန်ကြားမှု (TCDD) 4.311.130,93 /4JCC နံပါတ်, Kayseri အကြားတံတားလေလံနှင့်£ 26 စာချုပ်အဆိုပြုချက်ကို Serdar KAÇARချီးမြှင့်တော်မူကြောင်းကိုအလုပ် 2.925.191,44 ကုမ္ပဏီအတွက်တင်ဒါမှတွေ့NECATİKILIÇÇELİKရရှိခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, 18.963 mxnumx သံပန်းချီထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, ဆံပင်တည်ဆဲ Scarecrow (2 တန်ချိန်) အပေါ်ပြုမိနှင့်သံလက်ရန်း၏ profiled 48,60 တန်ချိန်နှင့် Baklava ချပ် SACD အလုပ်အကိုင်များပြုလုပ်ခြင်းလမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းကိုဖုံးလွှမ်း။ ပေးပို့အလုပ် 194,256 (တရာငါးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
Divrigi Kayseri လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်မှာမီးရထားတံတား၏တိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ 18 / 07 / 2019 တင်ဒါတွေ့ရှိတံတားစီးပွားရေးတိုးတက်စေူခင်းအကြား Divrigi-Kayseri ၏ TCDD4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှုန်း 2019 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားမှု (TCDD) 275427 / 2.921.466,76 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 4.311.130,93 TL ၏တိုးတက်စေူခင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်တံတားစီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်အကြား Divrigi-Kayseri ၏ TCDD4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလေလံနှင့်ဆုချီးမြှင့်နှုန်း 26 2.925.191,44 Serdar KAÇAR + NECATİKILIÇÇELİKဖက်စပ်ရရှိခဲ့သည့်မရည်ရွယ်သောအကျိုးဆက်များအဆိုပြုချက်ကိုနေဖြင့်အပြီးသတ်ခဲ့သောစာချုပ်။ နုလေလံပါဝင်4ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သော, 18.963 mxnumx သံပန်းချီထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, တည်ဆဲ Scarecrow (2 တန်ချိန်) ရက်နေ့မှာအမှုကိုပြုဆံပင်နှင့် 48,60 Profiled တန်ချိန် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Divriği-Kayseri တံတားတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းခွင်အကြားတွေ့ 20 / 06 / 2019 Divrigi-Kayseri STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ bridge စီးပွားရေးတိုးတက်မှု TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအကြားတွေ့သည်။ Divrigi-တိုးတက်မှု၏ဒေသဆိုင်ရာဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး TCDD4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Kayseri အလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်အကြားတံတားအဆိုပါအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအဆိုပြုချက်ကိုသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်, 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ KN: နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည် 2019 / 275427 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) အမည်: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးခ) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း ...
Divriği Erzincan ရထားလမ်းတံတားလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်မှာတွေ့ရှိတိုးတက်စေူခင်း 17 / 07 / 2019 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားDivriği- Erzincan ၏4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး4၏တံတားစီးပွားရေးတိုးတက်မှုလေလံရလဒ်အကြားတွေ့သည်။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 274835 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 3.344.662,36 TL နှင့်တိုးတက်စေူခင်းအကြောင်းကို TCDD 5.006.508,63 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုDivriği- Erzincan အလုပ်နူးညံ့4ကုမ္ပဏီများမှလေလံဆွဲထားပြီးနောက်ဆုံးရလာဒ်များအရသိရသည်စာချုပ်မဟုတ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် 31 TL ၏ကုန်ကျစရိတ်အကြားတစ်ဦးတံတားတွေ့ရှိခဲ့ 3.351.446,60 ကာဣနန်လေလံ£ADIGÜZEL + İHSAN Sahin အဆိုပါဖက်စပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ နုလေလံပါဝင် 12 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သော, 15.129 သံအစွန်းအထင်း,2mxnumx သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်း mxnumx ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တိုးတက်စေူခင်းသူ Work-Erzincan Divrigi ကြားတံတားတွေ့ရှိခဲ့ 20 / 06 / 2019 Divriği Erzincan STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ bridge စီးပွားရေးတိုးတက်မှု TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအကြားတွေ့သည်။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့်များ၏စာရင်း CONTROL SERVICE ကိုရုံး TCDD4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Divrigi-အကြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်တိုးတက်အောင် Erzincan တံတားများအဆိုပါအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအဆိုပြုချက်ကိုသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်, 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ KN: နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည် 2019 / 274835 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) အမည်: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးခ) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တံတားYerköy-Kayseri-Ulukışlaပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်လိုင်းအတွက်ပြုပြင်အလုပ် 14 / 12 / 2015 အဆိုပါဒုတိယ Hatter TCDD2မှာတံတား၏Yerköy-Kayseri-Ulukışlaပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်။ ပိုင်ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လိုင်းပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တည်ဆောက်နေစီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက်YERKÖY-KAYSERÝ-ULUKISLA ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အကျင့်ကိုကျင့်တံတားအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ရှာပါ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 131396 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 06005 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mehmethanifiogut@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောအင်တာနက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်မှတ်တမ်း လိပ်စာ: နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဘာသာရပ် ...
TCDD4။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Divriği-Kayseri တံတားတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းခွင်အကြားတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တိုးတက်စေူခင်းသူ Work-Erzincan Divrigi ကြားတံတားတွေ့ရှိခဲ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါစက်လုပ်သမားYaptırılacaktırအတွက် Kayseri-Sivas-Divriğiလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing သတိပေးစနစ်
တင်ဒါ TCDD Akcay ပညာရေးနှင့်အပန်းဖြေ၏စီးပွားရေးရလဒ်များတိုးတက်စေူခင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kayseri Boğazköprü TCDD ခရီးသည်ယောဘသည်အကြား Kayseri ၏ရွှေ့ပြောင်းခြင်း